ILoft kwiVenkile yaseVolland
I-Loft ikumgangatho wesibini, ijonge kwigalari yobugcisa beVenkile yaseVolland. Ebusuku, ngaphandle kokuba kukho isiganeko esivulekele uluntu, unayo igalari kuwe. Iindwendwe zisixelela ukuba kuvakala ngathi "ubusuku kwimyuziyam." I-Volland Store ikwindawo esemthethweni emnyama. Isibhakabhaka sizele ziinkwenkwezi - kwaye ukuba uyicwangcisa ngokufanelekileyo, kukho inyanga epheleleyo.
Ngokwenene indawo yokuhlala yasemaphandleni entliziyweni yeFlint Hills. Ikofu inikwe, kodwa yiza nento yesidlo sakusasa.
ILoft ikwindawo yogcino lwembali jikelele ethe yaphinda yajongwa njengegalari yobugcisa, indawo yeziganeko, kunye nendawo yokuhlanganisana yoluntu. IVenkile yaseVolland ihleli kwindawo esebenzayo phakathi kweedolophu ezincinci kumbindi weFlint Hills. Ikofu ibonelelwe, kodwa yiza nento yesidlo sakusasa ukuba awutyekelanga kuhambo lweemayile ezisibhozo ngeham namaqanda. Uluhlu lokutyela kunye neeyure zokusebenza ziya kunikwa. Iinketho ngeCawe kwiindawo zokutyela zilinganiselwe.
Eyona ndlela yokwamkela i-intanethi isekhitshini kwinqanaba legalari okanye ngeefestile zangaphambili zegalari. I-Intanethi ihlala yanele ukusetyenziswa okuqhelekileyo, kodwa hayi ukusasazwa kwevidiyo. Inkonzo yeselula iyingxaki. I-U.S. Cellular ngumboneleli okhethiweyo kwindawo, kodwa kwabanye ababoneleli, ukuqhuba ukuya phezulu kwinduli ekufutshane ngokuqhelekileyo kusebenza. Awuyi kuzifumana zonke izinto eziluncedo kwindawo yasezidolophini; uya kufumana into engcono. Zisa imvakalelo yakho yokumangaliswa kunye nokufumanisa kunye nomnqweno wamava awodwa.
Ivenkile yeVolland yindawo yoBugcisa kunye noLuntu. Iiyure zokusebenza eziqhelekileyo ziyi-12-5 pm ngeMigqibelo nangeeCawe, kwaye kukho iziganeko eziqhelekileyo ezitsala isihlwele kwiVenkile. Nceda undwendwele iwebhusayithi yethu (Izinto ezenzekayo> Izinto ezenzeka ngoku) ukuze ubone iziganeko ezinokuthi zenzeke ngexesha lokuhlala kwakho. Wamkelekile ukuba uzimase nayiphi na iminyhadala okanye iindibano zethu!
IVenland yaseVolland ikwiMill Creek Valley, enye yezona ndawo zintle zihamba ngeFlint Hills. Ubumelwane buyindawo esebenzayo yeefama, kunye nololiwe ohamba kuyo. Indawo efanelekileyo yokukhupha kunye nokuvuselela.